यी ४ राशिका व्यक्तिहरुको हुन्छ लव म्यारीज, जान्नुहोस् तपाईको किस्मतमा के ? | सुदुरपश्चिम खबर
यी ४ राशिका व्यक्तिहरुको हुन्छ लव म्यारीज, जान्नुहोस् तपाईको किस्मतमा के ?
विवाह हरेक व्यक्तिको लागी खास पल हुने गर्दछ । केही व्यक्तिहरु लव म्यारीजलाई सहि मान्दछन् भने त्यस्तै केही व्यक्तिहरु अरेन्ज म्यारीजलाई सहि मान्ने गर्दछन् ।
आउनुहोस् जानौँ कुन राशिका व्यक्तिको लव म्यारीज हुने सम्भावना धेरै हुन्छ त ?
विवाह हरेक कोहीको लागी एक विशेष पल हो। यो कुनै पनि परिवार को लागी एक विशेष दिन हुने गर्दछ । जसलाई लिएर हरेक कोही उत्साहित हुने गर्दछन् । कुनै यस्तो व्यक्तिसँग आफ्नो पुरै जीन्दगी बिताउनुहोस् जसले तपाईलाई बुजोस् र माया गरोस् । विवाहलाई लिएर सबैको आ –आफ्नो बिचार हुन्छ। आज हामी तपाईलाई बताउने छौं कि कुन राशिका मानिसहरु लाई प्रेम विवाह को लागी अधिक संभावना हुन्छ।
कोही व्यक्तिहरु लव म्यारीज गर्न मनपराउँछन् । त्यस्तै कोही व्यक्तिहरु अरेन्ज म्यारीज गर्न मन पराउँछन् । ज्योतिषशास्त्र अनुसार, तपार्यको राशि तपाईको व्यक्तित्व र तपाईको बारेमा धेरै कुरा बताउने गर्दछ ।
जब कुरा डेटिंगको आउने गर्दछ तब यी राशिका व्यक्तिहरु अत्यन्तै रोम्यान्टिक हुने गर्दछन्। यी राशिका व्यक्ति अत्यन्तै भावुक हुने गर्दछन् भने छिट्टै प्रेममा फस्ने पनि गर्दछन् । यस्ता व्यक्तिहरु आफ्नो साथी या त ब्वाइफ्रेन्ड र गलफ्रेन्डसँग विवाह गर्ने सम्भावना राख्दछन् जो पछि गएर उनीहरुको लाइफपार्टनर बन्दछन् ।
यस राशिका व्यक्ति आफ्नो लाईफपार्टनरलाई चुन्दा धेरै ध्यान राख्ने गर्दछन् । यस्ता व्यक्तिहरुले कुनै पनि कुरामा सम्झौता गर्दैनन् । र आफ्नो जीवनसाथीलाई चुन्दा पनि बहुतै जिद्धी हुने गर्दछन् । त्यसैले यो उनीहरुको निर्णय हुन्छ कि उनीहरु आफ्नो जीवन कोसँग बिताउन चाहान्छन् । यदि यिनीहरुको लव अफयेर छ भने यिनीहरु यसलाई विवाहमा बदल्न सक्छन् ।
मिथुन राशिका मानिसहरु सामाजिक र खुला दिमागका हुन्छन्। यसै कारणले यी मानिसहरु सामाजिक सभा र कुनै पार्टीमा आफ्नो साथी पाउँछन्। यिनीहरु आवेगपूर्ण हुन्छन् त्यसैले यिनीहरु सजीलै प्रेममा पर्छन्। यी राशिका व्यक्तिहरु धेरै छिटो निर्णय लिन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरु आफ्नो रोजाइको जीवन साथी चाहन्छन्। त्यसैले मिथुन राशिका मानिसहरु को लागी प्रेम विवाह को संभावना धेरै छ।
धनु राशिका मानिसहरु आफ्नो शर्त मा जीवन बाँच्न चाहन्छन्। उनीहरु धेरै विद्रोही स्वभावका छन्। यसको मतलब यो हो कि यिनीहरु मागी विवाह बाट बच्न चाहन्छन्। यिनीहरु आफ्नो मनपर्ने एक व्यक्ति सँग विवाह गर्न चाहान्छन् जो अत्यन्तै सम्झदार र बुद्धिमानी होस् । नयाँ पुस्ता बाट सभार